Ii-AirPods Max ngee-euro ezingama-415 kuphela kwiAmazon | ndisuka kuMac
La into yokuqala enkulu enxulumene nemveliso ethile ye-Apple evela kwintengiso kaJanuwari, uya kuyifumana kwi-AirPods Max. Ixabiso eliqhelekileyo le-Apple AirPods Max yi-euro ezingama-629, ixabiso apho sinokuyithenga ngokuthe ngqo kwi-Apple Store.
Kodwa ukuba sifuna usigcine ngaphezu kwe-euro ezingama-200, sinokuthatha ithuba lonikezelo olukhoyo okwangoku kwiAmazon kwaye silubambe ngee-euro ezingama-415 kuphela, eyi 34% isaphulelo kwixabiso layo lesiqhelo, njengoko ndibonisile, lidlula i-euro ezingama-600.
Ngokungafaniyo nonikezelo lwangaphambili kule modeli yee-headphone esizipapashe kwiiNdaba ze-iPhone, olu nikezelo luyafumaneka kwi-4 yemibala emi-5 efumaneka kuyo: indawo engwevu, isilivere, eluhlaza kunye nepinki.
Imodeli eluhlaza okwesibhakabhaka, nangona ikwathengiswa, ayifikelelanga kwixabiso eliphantsi lembali yeminye imibala. Njengesiqhelo, esi sixhobo ngeli xabiso ifumaneka kwiiyunithi eziqingqiweyo kunye nenqanawa yosuku olulandelayo.
IiNgcaciso zeAirPods Max
Kunye ne-AirPods Pro, i-AirPods Max zezinye ii-headsets ze-Apple quka inkqubo yokucima ingxolo esebenzayo oko kusivumela ukuba sizimele ngokupheleleyo kwindawo esihlala kuyo. Ngaphakathi, sifumana i-chip ye-H1, iyahambelana nesandi sendawo, ibandakanya ukulinganisa okuguquguqukayo kwaye iSiri isoloko isesandleni sethu.
Ngokuphathelele ukuzimela, i-AirPods Max isinika ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-20 zokusetyenziswa rhoqo ngokurhoxiswa kwengxolo esebenzayo okanye imowudi yesandi ye-ambient esebenzayo. Kunye ne-AirPods Max, siya kufumana i-Smart Case eyenza imowudi yokugcina amandla ephantsi kakhulu kunye nentambo yombane ukuyibiza.
Thenga ii-AirPods Max ngee-euro ezingama-415 kwiAmazon.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ii-AirPods Max ngee-euro ezingama-415 kuphela kwiAmazon